History & Culture Ireo 80 taona
by Jennifer L. Goss, mpanoratra mpanoratra
Ilay Ocean Explorer fanta-daza, Robert Ballard, ny tranom-borona
Taorian'ny nidinan'ny Titanic tamin'ny 15 aprily 1912, dia nirohotra teo ambonin'ny tany ny Oseana Atlantika nandritra ny 70 taona talohan'ny nahitana azy. Ny 1 septambra 1985, dia nisy antokon'ny Amerikanina-Frantsay, tarihin'ilay dokotera amerikanina malaza Dr. Robert Ballard, nahita ny Titanic mihoatra ny roa kilaometatra ambanin'ny haavon'ny ranomasina tamin'ny alalan'ny fampiasana fantsona iray tsy fantatra anarana antsoina hoe Argo . Io zava-baovao io dia nanome dikany vaovao ho an'ny sainan'i Titanic ary namorona nofinofy vaovao tany amin'ny fipoahan'ny ranomasina.
Ny diany tao Titanic
Niorina tany Irlandy tamin'ny 1909 ka hatramin'ny 1912 tamin'ny anaran'ny White Star Line anglisy ny Titanic , niala tamin'ny seranan-tsambo Eoropeana any Queenstown, Irlandy, ny 11 Aprily 1912. Nitondra mpandeha maherin'ny 2.200 sy mpanazatra ny sambo lehibe nanombohany ny diany manerana an'i Atlantika, nitarika an'i New York.
Ny Titanic dia nitondra olona avy any amin'ny faritra rehetra. Ny saran-dalana dia namidy ho mpandeha voalohany, faharoa, ary fahatelo, ary ny tarika farany dia ahitana mpifindra monina mitady fiainana tsara kokoa any Etazonia. Ireo mpandeha malaza voalohany dia nisy an'i J. Bruce Ismay, tale mpitantana ny White Star Line; Benjamin Guggenheim; ary mpikambana ao amin'ny fianakaviana Astor sy Strauss.
Ny Fandresen'ny Titanic
Andro telo andro taorian'ny nandehanana nilomano, dia namely ny ranomandry iray ny Titanic tamin'ny 11:40 hariva tamin'ny 14 Aprily 1912, tany amin'ny faritra avaratr'i Atlantika. Na dia nilentika nandritra ny roa sy sasany isaky ny sambo aza ny sambo, dia maty noho ny tsy fahampian'ny sambo mamonjy aina sy ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ireo mpandeha sy mpandeha.
Mety nahitana olona maherin'ny 1 100 ny sambon-danitra, nefa 705 ihany no voavonjy; 1 500 teo ho eo no maty tamin'ny alina namonoana ny Titanic .
Nanafika ny olona manerana izao tontolo izao rehefa naheno fa nilentika ny "Titanika" tsy hay lazaina. Te hahalala ny tsipiriany momba ilay loza izy ireo. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo sisam-paty afaka nizara, ny teoria mikasika ny fomba sy ny antony nilentesan'ny Titanic dia tsy niorina afa-tsy teo am-pelatanan'ny sambo lehibe.
Nisy olana iray monja - tsy nisy olona azon'izy ireo antoka hoe aiza no nahalavoan'ny Titanic .
Soso-kevitra momba ny Oceanografie
Raha mbola nahatsiaro azy, Robert Ballard dia naniry ny hahita ny fandripahana ny Titanic . Ny fahazazany tany San Diego, Californie, akaikin'ny rano dia nahatonga ny fientanam-piainany ela be tamin'ny ranomasina, ary nianatra nanararaotra raha vao vitany. Taorian'ny nahazoany mari-pahaizana tao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, Santa Barbara tamin'ny taona 1965 niaraka tamin'ny sehatry ny simia sy geology, dia nanao sonia ny tafika i Ballard. Roa taona taty aoriana, tamin'ny taona 1967, i Ballard dia nafindra tany amin'ny Navy, izay nanendrena azy ho ao amin'ny Deep Submergence Group ao amin'ny Institution Wood Research Institute (Woods Hole Oceanographic Research) ao Massachusetts, ka manomboka ny asa-kanto an-tsehatra miaraka amin'ny mpangalatra.
Tamin'ny taona 1974 dia nahazo diplaoma dokambarotra roa i Georget (Geology sy Geophysics) avy any amin'ny Oniversiten'i Rhode Island ary nandany fotoana be dia be mitaingin-drano lalina tao Alvin, mpangorom-pahefana nanampy azy. Nandritra ny fitsidihana taorian'ny 1977 sy 1979 teo akaikin'ny Galapagos Rift, dia nanampy tamin'ny fikarakarana ny fantson-drano tamin'ny rano , izay nitarika ho amin'ny fikarakarana ireo zavamaniry mahagaga izay nitodika tany amin'ireto trano ireto. Ny fandalinana siantifika ireo zavamaniry ireo dia nitarika ny fahitana chimosynthesis, fomba iray izay ampiasain'ny zavamaniry ny fanehoan-kevitra momba ny simika fa tsy ny hazavan'ny masoandro mba hahazoana hery.
Na izany aza dia maro ny sambon'ny sambo Ballard no nijery ary na dia betsaka aza ny velarantanin'ny ranomasina nosoratany, dia tsy nanadino mihitsy i Ballard momba ny Titanic . "Te hahitako foana ny Titanic foana aho ", hoy i Ballard. "Mt. I Everest teo amin'ny sehatry ny fireneko-iray amin'ireo tendrombohitra izay tsy mbola niakatra mihitsy. " *
Fandaminana ny iraka
Ballard no tsy voalohany nitady ny Titanic . Nandritra ny taona maro, dia nisy ekipa maromaro nipoitra mba hahitana ny rivo-doza ilay sambo malaza; Ny telo amin'izy ireo dia nahazo famatsiam-bola avy amin'ny olom-bitsy Miozolmana Jack Grimm. Tamin'ny famoahany farany tamin'ny 1982, i Grimm dia naka sary an-tsaina ny zavatra ninoany fa mpiloka avy amin'ny Titanic ; Ny hafa kosa nino fa vato fotsiny io. Ny fihazakazahana ny Titanic dia ny hanohy, amin'ity indray mitoraka amin'i Ballard ity. Saingy aloha, nila vola izy.
Raha nanome ny tantaran'i Ballard tamin'ny tafika an-dranomasina amerikana, dia nanapa-kevitra ny hangataka azy ireo hamatsy ny famindrany izy.
Nanaiky izy ireo, saingy tsy noho ny fananany fahalianana tamin'ny fitadiavana ny sambo efa ela. Raha ny tokony ho izy dia te-hampiasa ny teknolojia Ballard izay hahatonga azy ireo hanampy azy ireo hahita sy hamotopototra ny fisamboran'ny sambo amboara nokleary roa ( USS Thresher sy ny USS Scorpion ) izay efa very tany amin'ny taona 1960.
Ny fikarohan'i Ballard ny Titanic dia nanome tantara tsara momba ny Navy, izay te hitazona ny fitadiavany ny onjam-pireneny very mangina avy amin'ny Firaisana Sovietika . Nahagaga fa nitazona ny tsiambaratelon'ny asa nanirahana azy i Ballard, na dia nanamboatra ny teknolojia aza izy ary nampiasa azy io mba hahita sy hijery ny sisa tavela amin'ny USS Thresher sy ny sisa tavela amin'ny Scorpion USS . Raha nanadihady ireo tranga ireo i Ballard, dia nianatra bebe kokoa momba ny saha rava izy, izay tena manaporofo fa tena ilaina ny mahita ny Titanic .
Vantany vao vita ny iraka miafina dia afaka nifantoka tamin'ny fikatsahana ny Titanic i Ballard. Na izany aza, dia roa herinandro monja no azony hanaovana izany.
Mikaroka ny Titanic
Tany amin'ny faran'ny Aogositra 1985 rehefa nanomboka ny fikarohana i Ballard. Nanasa ekipa fikarohana frantsay izy, tarihan'i Jean-Louis Michel, mba hiara-hiasa amin'io dia. Nankany amin'ny toerana azo antoka ny toeram-pialan-tsasatry ny Titanic ny Korr , Ballard sy ny ekipany, teo amin'ny moron-dranomasin'ny ranomasimbe Navy, 1000 km teo atsinanan'i Boston, Massachusetts.
Raha efa nampiasaina teo akaikin'ny ranomasin-dranomasina ny fitsangatsanganana teo aloha mba hitady ny Titanic , dia nanapa-kevitra i Ballard fa hanao fanatanjahan-tena maromaro mba hanitarana faritra bebe kokoa. Afaka nanao izany izy noho ny antony roa.
Voalohany, taorian 'ny nandinihana ny ampahan' ny fanambanin-dranomaso roa, dia hitany fa ny riandranomasin-dranomasina matetika dia nanafotra ny lafin 'ny lozam-piaramanidina nidina an-dalantsara, ka namela lavaka lavalava lava. Amin'ny lafiny faharoa, Ballard dia nanamboatra fomba fitondra vaovao tsy misy olona ( Argo ) izay afaka mijery faritra maro, mando lalindalina kokoa, mijanona anaty rano anaty rano mandritra ny herinandro maromaro, ary manome sarin-javatra mazava sy mazava momba izay hitany. Midika izany fa i Ballard sy ny ekipany dia afaka nijanona tao amin'ny Knorr ary nanara-maso ireo sary nalaina tao Argo , miaraka amin'ny fanantenana fa ireo sary ireo dia mety hisambotra sombin-tsavona vitsivitsy.
Tonga tao amin'ilay faritra ny Knorr tamin'ny 22 Aogositra 1985 ary nanomboka namafa ny faritra nampiasain'i Argo . Tamin'ny marainan'ny marainan'ny 1 septambra 1985, ny fisehoana voalohany tamin'ny Titanic tany amin'ny 73 taona dia niseho teo amin'ny efijery Ballard. Niparitaka ny sarin'ny iray tamin'ireo boaty ao Titanic tafiditra ao anatin'ilay faritra afovoan-dranomasina eny amoron-dranomasina. Ny ekipan'i Knorr dia faly noho ny fahitana, na dia nahatsikaritra ny fahitana azy ireo nipoitra teo an-tampon'ny fasana misy olona maherin'ny 1.500 dia nanisy feon-tononkalo ho an'ny fankalazana azy ireo.
Ny fitsangatsanganana dia hita ho fitaovana hanilihana ny hazakazak'i Titanic . Talohan 'ny nahitana ilay rivo-doza dia nisy ny finoana fa ny Titanic dia niraikitra tamin' ny ampahany iray. Ny sarin'ny 1985 dia tsy nanome fampahalalana mazava momba ny sifotra ny sambo ny mpikaroka; Na izany aza dia nametraka fototra fototra fototra izay nanohitra ny angano voalohany.
Ballard dia niverina tany amin'ny Titanic tamin'ny 1986 niaraka tamin'ny teknolojia vaovao izay namela azy hijery akaiky ny afovoan-tsambo.
Nangonina ireo sary izay nampiseho ny sisa tavela tamin'ny hatsaràna izay nahasambotra ireo nahita ny Titanic teo amin'ny haavony. Ny tranoben'ny Grand, ny horonantsary mbola mihantona, ary ny asa an-tery mahavariana dia samy nalaina sary nandritra ny fandefasana fahombiazana faharoa nataon'i Ballard.
Hatramin'ny taona 1985, dia nisy andian-tsambo maromaro tao amin'ny Titanic . Maro amin'izy ireny no nifanditra, satria nitondra zavaboary an-jatony maromaro tao amin'ny sisin'ny sambo ny mpanafika. Ballard dia niely be manohitra ireo ezaka ireo, ary nilaza fa tsapany fa mendrika hialana am-piadanana ny sambo. Nandritra ireo dian-dàlana roa voalohany nataony, dia nanapa-kevitra izy fa tsy hitondra zavatr'olona hitan'ny maso. Nahatsapa izy fa tokony hanaja ny fahamasinan'ny fialofana amin'ny fomba mitovy amin'izany ny hafa.
Ny karazana fitaovam-piadiana lehibe indrindra dia ny RMS Titanic Inc. Ny orinasa dia nitondra zavakanto maromaro nanintona ny tany, anisan'izany ny ampahany lehibe amin'ny sambon'ny sambo, ny entana an-jaridaina, ny fitaovana fisakafoanana, ary ny tahirin-tsakafo voatahiry ao anaty oksizenina miongana . Noho ny fifampiraharahana teo amin'ny orinasa teo aloha sy ny governemanta Frantsay, ny vondrona RMS Titanic dia tsy afaka nivarotra ireo artifacts tany am-boalohany, dia nampiseho azy ireo fotsiny ary nanangona ny fidirana amin'ny fividianana vola sy ny vokatra. Ny fampiriana lehibe indrindra amin'ireo artifacts ireo, mihoatra ny 5.500 eo, dia ao Las Vegas, Nevada, ao amin'ny Luxor Hotel, eo ambany fitarihan'ny anarana vaovao RMS Titanic, Premier Exhibitions Inc.
Ny Titanic dia miverina any amin'ny efijery Silver
Na dia hita tamin'ny sarimihetsika maro nandritra ny taona aza ny Titanic , dia ny sarimihetsika "James Cameron" tamin'ny 1997, Titanic , izay nandrisika ny tombontsoa goavana maneran-tany ho an'ny sambo. Ny sarimihetsika dia nanjary iray amin'ireo horonan-tsary malaza indrindra hatramin'izay.
Ny faha-100 taonan'ny fanafoanana ny Titanic tamin'ny taona 2012 dia nanosika indray ny fahalianana indray tamin'ity voina ity, 15 taona taorian'ny sarimihetsika nataon'i Cameron. Ny tranonkalan'ny tranomaizina dia azo ekena ho antsoina hoe faritra voaaro ho toy ny UNESCO an'ny Lovan-tany, ary koa Ballard dia miasa mba hiarovana ny sisa.
Ny fitsidihana tamin'ny volana Aogositra 2012 dia nanambara fa ny fitomboan'olombelona dia nahatonga ilay sambo handripaka haingana kokoa noho ny efa nandrasana. Ballard dia nanomana drafitra iray hampiadana ny fizotran'ny fanimbazimbana-hosodoko ny Titanic raha mbola mitoetra 12.000 metatra ambanin'ny tany ambany-ny ranomasina saingy tsy novatsiana ny drafitra.
Ny fahitana ny Titanic dia fahatanterahana lehibe, fa tsy ny tontolo iainana ihany no nifanditra momba ny fomba hikarakarana ity tranga manan-tantara ity, mety ho tandindomin-doza ny zavamisy ankehitriny. Ny Premier Exhibitions Inc. dia nanao fangatahana ho fatiantoka tamin'ny taona 2016, nangataka fahazoan-dàlana avy amin'ny fitsarana tsy refesi-mandidy hamidy ny karazam- bolan'ny Titanic . Amin'izao fotoana izao, ny didim-pitsarana dia tsy manapa-kevitra amin'ny fangatahana.
Navoakan'i Michael Jackson Thriller
Ilay mpiady lakana aviavy
Ny famonoana an'i John Lennon
Baomba mandatsa-dranomaso 103 Ho an'i Lockerbie
Mpanafika ny Mpanjakavavin'ny Mpanjakavavy Elizabeth Elizabeth
Fandringanana an'i Kent
Glasnost sy Perestroika
Ny tantaran'ireo zaza kobam-paty
MASH TV Show Premiers
Fitsipi-pitondrantena, fitsipika ary fitsipika: ahoana no ifandraisan'izy ireo?
Ny vazivazy tsara indrindra amin'ny televiziona tsara indrindra momba ny fifidianana 2016
Ny famakiana ny Apps ho an'ny tanora dia te-hamaha
Ny fahasambaran'ny firenena
Inona ny Andragogy ary iza no mila mahafantatra?
Ohatra mikasika ny fananana simika
Meteza amin'ny slogans momba ny fiarovana
7 Zavatra Mankasitraka Ireo Tanora Kristiana Mankasitraka Izany Taona Ity
Raha te handika gidro Golf ianao, mila marimaritra iraisana ianao
Fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny midika, mediana, ary ny fomba
Araho ity baiko ity ho amin'ny teny Frantsay marina
Fiarahabana avy amin'ny Oniversite Francis Marion
6 Fiteny mahafinaritra mampiasa ny teny hoe 'Cat' amin'ny teny frantsay
Halal mihinana sy misotro
University of California ao amin'ny Santa Barbara (UCSB) Admissions
University Academies of Illinois
Fahatakarana ny mari-pamantarana marim-pototra amin'ny fitsapana hosoka
Aiza no hividianana fitaovam-pialamboly tsy mendrika?
Top Cheerleading Positions: Flott, Basing, and Spotting
Endriky ny matoanteny amin'ny teny italiana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny italiana
Top 60 Country Music Singles 2005
Biografian'ny Emperora Joshua Norton